Fitohizan'ny hafatra : Miantso ny kristiana rehetra ihany koa, miverena h...
RBNIR - 05/10/2018 07:50
Miantso ny kristiana rehetra ihany koa, miverena hanaraka ilay tena fampianarana tsy misy kilema fa efa ho tonga ny farany e!
Ny fanjakana misy antsika dia tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity...koa aza variana amin'ny fanjakan'izao tontolo izao fa ilay fanjakan'Andriamanitra katsahina tsara dia aza matahotra sy manahy ny amin'izay mety ho fiainanao eto amin'ity izao tontolo izao ity....
« Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Matio 6:33)
rhaj0 - 05/10/2018 19:14
ka ilay fanjakana katsahin-dry Mailhol hanjakana anie ry RBNIR ka ao Dago ao, fa tsy any an-danitra, @ izao "fanjakan'Atra any an-danitra any" izao ee... i Saoly io izany hoz'ianao efa nanao an'izay.. fa i Samoela izany no titianao kokoa... satria ve, na dia nampian'Andrmntra azany i Saoly sy ny fanjakany, dia mbola nivaralila ny vahoaka?
RBNIR « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. »
Izany hoe, ry RBNIR ao izany, raha te-hahazo zavatra iray (fanjakana eto an-tany), dia mikatsaka zavatra hafa (fanjakana any an-danitra), fa avy eo, ho azo ho azy eo foana HONO ilay voalohany.
Hotry ny hoe, mikatsaka ny hihinana paoma ry RBNIR, fa mihinana voatavo no ataony, dia ho azon-dRBNIR ho azy eo foana HONO ny paoma rehefa mivavaka ao izy ee...
RBNIR - 07/10/2018 02:46
Normal be raha tsy takatrao mihitsy ilay hoy aho rhajo satria ireo kristianina aza be dia be no tsy mbola mahafantatra an'izany ankehitriny (porofo mivaingana izao io tanisanao eo ambony io
fa tsy izy ihany fa b dia b no mitovy fisainana aminy.
benem - 08/11/2018 08:33
Na iza na iza mitondra eo na rakoto na rabe na randria na rasoa ,na iza na iza dia jereo avokoa ireo filoham-pirenena hafa any amin4ny firenena mandroso fa ny andry zareo mitazona foana ny fombany ny filoha.
Ohatra ny mpanjaka ny maroc jereo ny fiankanjony,ireny dia midika hoe manaja ny fombany izy
ny filohampirenena arabo,sns
Page rendered in 1.7629 seconds